ရွှေဘုန်း(စေတနာပန်းခင်း): ရင်နင့်စေသော ပန်းကလေး တစ်ပွင့် အကြောင်း (ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံသည်)
ကိုယ်အတွေးနဲ့ကိုယ် အလျင်စလို လျှောက်လာတုန်း…အရမ်းရင်းနှီးနေတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အသံကြောင့် နောက်ကို လှည့်ကြည့်မိသည်…
သြော်...ငါ့နှယ်နော်…ကလေးတွေဆီ ရောက်ချင်ဇော အားကြီးနေတာနဲ့ပဲ အကြားအာရုံတွေက အရင် ရောက်နှင့်နေပါပေါ့လား၊ တကယ်ဆိုရင် ဒီအချိန်က သင်တန်းဌာန ဖြစ်တဲ့ ခမောက်စု ရွာလေး ကို ရောက်နေသင့်ပြီလေ…၊ အချိန်က နေ၀င်ရီတရော…မကြာခင်ဆို မိုးချုပ်တော့မည်၊ ဖြစ် ချင်တော့ အရင်လိုလို့ ကားမစောင့်ပဲ ယုံသလင်းကနေ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ ငှားစီးကာမှ ဆိုင်ကယ်က ရွာအ၀င်လမ်းမှာ ဘီးပေါက်တော့သည်၊ ဒါနဲ့ပဲ...
''ကဲ….မင်း ဆိုင်ကယ်ဘီး ဖာတာလည်း ငါမစောင့်နိုင်တော့ဘူး၊ ဆိုင်ကယ်ဘီး ဖာပြီးရင် ပြန်တော့၊ ရော့ ကယ်ရီခ ထောင့်ငါးရာ…"
စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ ကိုယ့်အထုပ်ကိုယ်ဆွဲပြီး တစ်ပါးတည်း…ရွာအ၀င်လမ်းကနေ လမ်းဆင်းလျှောက်ခဲ့ရသည်...။
''အရှင် ဘုရား၊ မိုးရွာနေတယ်လေ ဘုရား၊ တပည့်တော်ရဲ့ တဲလေးမှာ ခဏ ၀င်နားပါဦးလား...ပြီးမှ တပည့်တော် အရှင်ဘုရားကို စာကြည့်တိုက်အရောက် လိုက်ပို့ပါမယ်…"
အရေးထဲ အရာထင်ပြန်လေပြီ၊ အမြန်ရောက်ချင်နေပါပြီဆိုမှ နွေခေါင်ခေါင် သင်္ကြန်မိုးက ရွာအ၀င်မှာ ဆီးကြိုပြန်လေသည်။
''နေပါစေ..ဒကာကြီး၊ မိုးချုပ်တော့မယ်…ရောက်အောင်ပဲ သွားလိုက်တော့မယ်…''
''ဖျားနာနေပါ့မယ်…အရှင်ဘုရားရယ်၊ အရှင်ဘုရား ကလေးတွေက ဟိုမှာ တစ်နေကုန် အရှင်ဘုရား ဒီနေ့လာမယ်ဆိုလို့ စောင့်နေကြတယ်၊ အိမ်က လူကြီးတွေက ထမင်းစားဖို့ မနည်းလိုက်ခေါ်ရတယ်…တဲ့၊ တပည့်တော်တောင် သမီးလေးကို ခုနမှ ထမင်းစားဘို့ လိုက်ခေါ်ခဲ့ရတာ၊ ခု နောက်ဖေးဘက် ရောက်နေလို့ အရှင် ဘုရားလာတာ မသိတာ၊ သိရင် ထခုန်နေမယ်လေ…ကြွပါ အရှင်ဘုရားရယ်၊ မိုးချုပ်တော့လည်း မပူပါနဲ့ တပည့်တော် လိုက်ပို့ပါမယ်.."
ဒါနဲ့ပဲ မတတ်သာသည့် အဆုံး ရွာအ၀င်နားက လယ်စောင့်တဲလေးပေါ်သို့ တက်ပြီး မိုးခိုရတော့သည်…။
မျက်စိရှေ့မှ ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားလာသော တဲပိုင်ရှင် ကိုထွန်းဦးရဲ့ ၈-နှစ် အရွယ် သမီးငယ် …ထွေးထွေး…
"ပါတာပေါ့ သမီးရဲ့ ၊ ဒါပေမယ့် မနက်ဖြန် သင်တန်းဖွင့်မှ သူများတွေနဲ့ အတူတူ စားရမယ်နော်…"
"ဟဲ့ ဟဲ့ သမီး၊ ဘုန်းဘုန်းကို ဟုတ်ကဲ့ လို့ မပြောရဘူးလေ"…မီးဖိုချောင်မှာ ထမင်းချက်နေသော ထွေးထွေး အမေက လှမ်းဟန့်သည်။
"အော် မေ့လို့၊ တင်ပါ့ ဘုန်းဘုန်း "…ဆိုပြီး သမီးလေး ထွေးထွေး ခေါင်းလေး ပုသွားသည်။
သမီးလေး ထွေးထွေးကို ကြည့်ရင်း သင်တန်းမှာ ထွေးထွေးနဲ့ အရွယ်တူ ထူးခြားတဲ့ သမီးလေး ချစ်စနိုးကို သတိယမိသည်။ ရွှေဘုန်းမှာ သင်တန်းဌာန ငါးခု ရှိသည့် အနက် ဒီခမောက်စုသင်တန်းကတော့ အချက် အချာအကျဆုံးဖြစ်သလို စေတနာပန်းခင်း စတင်ခဲ့ရာ ဌာနလည်းဖြစ်တယ်လေ၊ ဒီရွာမှာ သင်တန်းဖွင့်တာ ဒီနှစ်နဲ့ဆိုရင် သုံးနှစ်ရှိပါပြီ၊ ဒီသုံးနှစ်မှာ လုံးဝ နှစ်တိုင်း မပျက်မကွက် တက်တဲ့ ကလေးတွေထဲမှ အထူးခြားဆုံးက သမီးလေး ချစ်စနိုး။
ရွှေဘုန်းက စာသင်နေရင်း နားတဲ့ အချိန်ဆို ပုံပြင်လေးတွေ ပြောပြ၊ နောက် သူတို့ရဲ့ အနာဂတ် အိပ်မက်လေးတွေကိုမေးရင်း သူတို့ အပျင်းပြေစေတယ်၊ ပုံပြင်ကတော့ သူတို့ သည်းခြေခိုက်ပေါ့…
ဒီမှာ ခဏ၊ ခဏ ချစ်စနိုးနဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေ တောင်းဆိုတတ်တာက
"ဘုန်းဘုန်း ၊ သရဲအကြောင်း ပုံပြင်ပြောပြ"
"သရဲအကြောင်း ပုံပြင်၊ သမီးတို့က မကြောက်ဘူးလား"
"ဟင် အဲဒါဆို ဘုန်းဘုန်းက သရဲ အကြောင်း ပုံပြင်ပြောပြလို့ သမီးတို့ ကြောက်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ"
အဲဒိတော့ ချစ်စနိုးက ချစ်စဖွယ် အမူရာလေးနဲ့…ခေါင်းလေးကို လိမ်ကာ၊ စောင်းကာ၊ ပခုံးလေးကို တွန့်ကာ ပြောတတ်သည်။
"သြော် …ကြောက်တော့လည်း၊ ဘုန်းဘုန်း သင်္ကန်းထဲ ၀င်နေလိုက်မှာပေါ့ ဘုန်းဘုန်းရဲ့၊….သင်္ကန်းဆို သရဲက လန့်ပြီး၊ မလာတော့ဘူးလေ၊ အဲဒါဆို သမီးတို့လည်း မကြောက်တော့ဘူးပေါ့''...သြော် တတ်လည်း တတ်တဲ့ ကလေးပါလား…။
တခါတရံ ရွှေဘုန်း က ပုံပြောတော့မယ်လို့ အစချီလိုက်တယ်…
ပုံပြင်က မစရသေးဘူး…ချစ်စနိုးက တစ်စခန်းထတယ်…
"ဘုန်းဘုန်း၊ ဝေသာလီ ဆိုတာ သမီးတို့ ရွာမှာ ရှိတဲ့ ဟို…ဘဲငန်းတွေ ရှိတဲ့ နေရာလားဟင်…"
သေပါလေရော….တောဘက်မှာ ဝေသာလီဆိုတဲ့ ဘဲငန်းတစ်မျိုးရှိတယ်လေ၊ လည်ပင်းရှည်ရှည် ၊ ခြေထောက်ရှည်ရှည်နဲ့ ကလေးတွေ တွေ့ရင် သူ့နှုတ်သီးနဲ့ လိုက်ပြီး လိမ်ဆွဲတတ်လို့ ဝေသာလီ ဘဲငန်းကို ကလေးတွေ ကြောက်ကြတယ်။
"မဟုတ်ပါဘူး၊ သမီးရဲ့၊ ဝေသာလီဆိုတာ ခုဘုန်းဘုန်းတို့ နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလို တစ်ချိန်က လူတွေ နေတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခုလေ"
"အော် မသိပါဘူး၊ ဘုန်းဘုန်းရယ်၊ သမီးက ဝေသာလီ ဘဲငန်းတွေပဲ ရှိတဲ့ နေရလားလို့…လန့်သွားတာပဲ၊ အဲဒါဆိုလည်း ဆက်ပြော…ဆက်ပြော"…လို့ သူက ဆရာမကြီး လေသံနဲ့ ဆရာလုပ်တတ်ပြန်သည်၊
ရွှေဘုန်းက ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ် အိပ်မက်တွေကို မေးပြီးဆိုရင် တစ်ချို့သားလေးတွက စစ်ဗိုလ်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်…ပြောတဲ့ အခါ ချစ်စနိုးက
"ဟဲ့…စစ်ဗိုလ်ကြီး၊ ဖြစ်ရင် စစ်တိုက်ရမှာပေါ့…"
"ဟ၊ စစ်သားပါဆိုမှ စစ်တိုက်ရမှာပေါ့၊ ဒါအဆန်းလား…"တဖက်က သားလေးကလည်း အရှုံးမပေး ပြန်ဖြေသည်၊ ဒီတော့ ချစ်စနိုးက..
"ဟာ၊ နင်ကလည်း စစ်တိုက်ရင် သေနတ်ကြီးတွေနဲ့ သူများအသက် သတ်ရမှာ၊ ငရဲကြီးမှာပေါ့ဟ၊ ဘုန်းဘုန်း သင်ထားတယ်လေ…"သူ့အသက်ကို သိလျှက်သားနဲ့ ၊ ဒေါသ စိတ်ထားသေစေလို"….အဲဒါ နင်မရဘူးလား.."
အဲလိုဥာဏ်ရွှင်တဲ့ ကလေးပါ၊ တစ်ဖက်ကလည်း ပြန်မေးတယ်၊
"အဲဒါဆို နင်ရော ကြီးလာရင် ဘာလုပ်မလဲ"
"ငါက ကြီးလာရင် ဆရာမကြီးလုပ်မှာ…"
"သမီးက ဘာဖြစ်လို့ ဆရာမကြီးဖြစ်ချင်တာလဲ ဖြေစမ်းပါဦး"… ရွှေဘုန်းက ၀င်ထောက်ပေးလိုက်တယ်။
"သမီးက ဘာဖြစ်လို့ ဆရာမကြီးဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့…ဘုန်းဘုန်းလို စာသင်ချင်လို့ပေါ့၊ ပြီးရင် ဆရာမကြီးဆိုတော့ အာဏာရှိတယ်လေ ဘုန်းဘုန်းရဲ့၊ အဲဒီတော့ အိမ်မှာ ဖေဖေ အရက်သောက်ရင် မသောက်နဲ့လို့ပြောလို့ ရတာပေါ့…"
ကလေးတွေရဲ့ ဘ၀ပုံရိပ်က လွှမ်းမိုးထားတဲ့ အနာဂတ် အိပ်မက်လေးတွေပါ…တစ်ခါမှာတော့ ကလေးတစ်ယောက် ရဲ့ အနာဂတ် အိပ်မက်အဖြေကြောင့် ရွှေဘုန်း မျက်စိပြူးရသည်။
"ကဲ…ပြောပါဦး၊ သားလေး ပြည့်ဖြိုးကရော…သားကြီးလာရင် ဘာဖြစ်ချင်လဲ…"
"သား ကြီးလာရင် ၊ ဘုရားဖြစ်ချင်တယ်…ဘုန်းဘုန်း"
မျက်လုံးရော မျက်ဆံရော ရှိသမျှ အကုန်ပြူးရတော့သည်…ဒီမှာလည်း ချစ်စနိုးက မနေ၊ ပက်ခနဲ ၀င်ထောက်တယ်၊
"ဟာ…နင်ကလည်းဟာ၊ မဟုတ်က ဟုတ်က၊ ဘုရားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် နင်ငရဲကြီးလိမ့်မယ်.."
"သမီး၊ အဲလို မပြောရဘူးလေ…သူများ ရဲ့ အတွေးဆိုတာ လေးစားရတယ်…သမီးရဲ့…"လို့ ဟန့်လိုက်တော့ ဇက်ကလေးပုပြီး ငြိမ်သွားတယ်၊
"ကဲ…ပြောပါဦး သားက ဘာလို့ ဘုရားဖြစ်ချင်တာလဲ…ဘုန်းဘုန်းကို ပြောပြလေ…."
"သား ကြီးလာလို့ ဘုရားဖြစ်ရင်၊ သားတို့ ရွာကြီးကို ဟိုး…သာတို့ ကြည့်ရတဲ့ ဗွီဒီယိုတွေထဲက နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေလို တိုးတက်သွားအောင် ဟပ်ချလောင်း…လုိ့ ဖန်ဆင်းပစ်လိုက်မှာ…"
သြော် … ကလေးတွေရဲ့ အတွေးထဲမှာ မြတ်စွာဘုရားကို တန်ခိုးရှင်လို့ ထင်မှတ်နေကြတာကိုး၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အတွေးလေးကိုတော့ လေးစားသွားမိတယ်…
"မဟုတ်သေးဘူး၊ သားရဲ့ ဘုန်းဘုန်းပြောပြမယ်နော်၊ ဘုန်းဘုန်းတို့ ဘုရားက သားထင်သလို ဟပ်ချလောင်း ဘုရားမဟုတ်ဘူး ၊ ဘုန်းဘုန်းတို့ ဘုရားက သူဖြစ်ချင်တာကို မရမနေ ကျင့်ယူတဲ့ ဘုရား၊ အဒီတော့ သားလည်း သားတို့ ရွာကြီးကို တိုးတက်စေချင်တယ်ဆိုရင် သူဌေးဖြစ်အောင် ကြိုးစား ၊ သား သူဌေးကြီးဖြစ်ပြီဆိုရင် သားတို့ရွာကို တိုးတက်အောင် လုပ်လို့ရတာပေါ့…ဟုတ်ဘူးလား…"
"ဟုတ်ပါတယ် ဘုန်းဘုန်း၊ အဲဒါဆို သား သူဌေးကြီးဖြစ်အောင်ပဲ ကြိုးစားတော့မယ်…"
သူတို့ နားလည်လောက်တဲ့ စကားလေးနဲ့ ရှင်းပြလိုက်တော့လည်း နားလည်သွားကြတာပါပဲ၊ တခါတရံ ရွှေဘုန်းက ပုံပြောရင်းနဲ့ စကားညှပ်ပြီး ဆုံးမတတ်တယ်၊
"သားတို့ သမီးတို့ လမ်းသွားလို့ လူကြီးသူမတွေ တွေ့ရင် ၀င်မတိုက်ရဘူးနော်၊ နောက် ဘုန်းဘုန်းတွေ တွေ့ရင်လည်း အရိပ်ကို မနင်းရဘူး၊ အရိပ်ရှောင်ပြီး သွားရမယ်" ဆိုတော့ ချစ်စနိုးက ဘယ်နေပါ့မလဲ။
"ဟာ…ဘုန်းဘုန်းကလည်း တချို့ ဘုန်းဘုန်းတွေက ဆိုင်ကယ်နဲ့ သွားတာ၊ သမီးတို့က သူတို့ အရိပ် ရှောင်ရအောင် ဘယ်လို လိုက်ရှာရမလဲ" မှတ်ကရော၊ ရွှေဘုန်းရေ ၊ ခံပေရော့…။
အမြဲတမ်း သူတို့လေးတွေ လိမ်မာစေဘို့ သူတို့ မှတ်မိလွယ်တဲ့ ဥပမာလေးတွေနဲ့လည်း ခိုင်းနှိုင်းပြီး ဆုံးမရသေးတယ်…။
"ဘုန်းဘုန်း ပြောမယ်၊ သားတို့ သမီးတို့ မှတ်ထားနော်၊ ခု သာတို့၊ သမီးတို့ အရွယ်က ၅-နှစ်၊ ခြောက်နှစ်ကနေ ၁၂ နှစ်ထိ၊ ဒီ အရွယ်တွေဟာ ဘာလေးတွေနဲ့ တူလဲဆိုတော့ ပန်းကလေးတွေနဲ့ တူတယ်…ကဲ ပြောပါဦး သားတို့ သမီးတို့ဟာ ဘာလေးတွေနဲ့တူ…"
"ပန်းကလေးတွေနဲ့ တူပါတယ် ဘုရား" …သံပြိုင်အော်ကြသည်။
"ဟုတ်တယ်...ဒါကြောင့် ဘုန်းဘုန်းတို့ သင်တန်းကို စေတနာပန်းခင်းလို့ ပေးထားတာပေါ့၊ ပန်းကလေးတွေဆိုတာ အစွမ်း သတ္တိ သုံးမျိုးရှိတယ်၊ အဲဒါတွေက (၁) ပန်းကလေးတွေဆိုတာ ကိုင်ကြည့်ရင် နူးညံ့တယ်၊ အဲဒီတော့ သားတို့ ၊ သမီးတို့ အမူရာလေးတွေကလည်း နူးညံ့ရမယ်၊ မဆဲရဘူး၊ မရိုင်းရဘူး၊ ရန်မဖြစ်ရဘူးနော်"
"နောက် နံပါတ် (၂)က ပန်းကလေးတွေဆိုတာ နမ်းကြည့်ရင် မွှေးတယ်၊ အဲဒီတော့ သားတို့ သမီးတို့ ဂုဏ်သတင်းဟာလည်း မွှေးနေရမယ်၊ ဟာ ဘယ်သူ့သားလေး၊ ဘယ်သူ့ သမီးလေးကတော့ လိမ်မာလိုက်တာဆိုရင် ဒါမွှေးတာပေါ့…ဟုတ်ဘူးလား၊ သားတို့၊ သမီးတို့…"
"ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘုန်းဘုန်း…" ကိုယ့်ကလေးတွေနဲ့ ကိုယ်ကတော့ ဟုတ် နေတာပဲ၊
"အဲ…နောက်ဆုံး တစ်ခုက ပန်းကလေးတွေက မြင်သူတကာကို နှစ်သက်စေတယ်၊ အဲဒီတော့ သားတို့ သမီးတို့ဟာ လိမ်မာမယ်၊ ယဉ်ကျေးမယ်၊ နူးညံ့မယ်ဆိုရင် မြင်သူတကာကို၊ နှစ်သက်စေမယ်၊ လူတိုင်းကလည်း ချစ်မယ်ဆိုရင် ခုလို သင်တန်းတွေလည်း တက်ရတယ်၊ မုန့်တွေလည်း မစားရဘူးလား"
ဒီလို အပိုလေးကလည်း ထည့်လိုက်သေး၊ ကြည့်လိုက်တော့ ဇာတ်လိုက်မင်းသမီး ချစ်စနိုး၊ ဒါပေမယ့် ဒီအထိ သူ ခပ်တည်တည်နဲ့ မျက်လုံးလေး ၀ိုင်းလိုက်၊ ဇက်ကလေးပုလိုက်နဲ့ ပြောသမျှကို နားထောင်နေသေးတယ်၊ ရွှေဘုန်း ရီစရာ ဟာသနှောပြီဆိုရင်တော့ သူက အငြိမ်မနေတော့၊ စောဒက တက်တတ်သည်။
"အဲဒိတော့ သားလေးတွေက ဘာပန်းလေးတွေနဲ့တူလဲ သိလား"
"အဲဒါဆို ဘုန်းဘုန်းပြောမယ်၊ သားလေးတွေက ရွှေပန်းလေးတွေနဲ့ တူတယ်"
ပျော်စေဘို့ ဟာသလေးနှောတော့ သူတို့ ဝေါခနဲ့ ပွဲကြ ကြတယ်လေ၊ အဲဒိတော့ သမီးလေးတွေက ရှက်သလိုလို ခေါင်းလေးတွေ ငုံ့ထားကြတယ်၊
"ကဲ…သမီးလေးတွေကရော ဘာပန်းလေးတွေနဲ့တူလဲ သိလား…"
သားတွေက အငြိမ်မနေ ရွတတဖြစ်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့် သမီးတွေကတော့ ခပ်တည်တည်ပဲ
"မသိပါ ဘုန်းဘုန်း"…တဲ့…အဲဒိတော့ ရွှေဘုန်းက ဆက်ပြောတယ်…။
"မသိရင် ဘုန်းဘုန်းပြောမယ်၊ သမီးတို့မှာ ရွှေပန်းရှိလား၊ အေး ရွှေပန်းမရှိတော့ ငွေပန်းပေါ့…"
တစ်ခန်းလုံး ဝေါခနဲ ရယ်ကြပါလေရော…ရယ်သံတွေဆုံးတော့ ဒေါ်ချစ်စနိုးက ထုံးစံအတိုင်း ဘယ်အငြိမ်နေပါ့မလဲ...သူ့စရိုက်အတိုင်း…ရွှေဘုန်းကို မျက်စောင်းလေးထိုးပြီးတော့….
"ဘုန်းဘုန်းနော်၊ ဘုန်းဘုန်း ငရဲကြီးလိမ့်မယ်…သူများတွေကို ရှက်စရာတွေ လိုက်ပြောနေတယ်"…တဲ့။
သူက ဒီလိုလည်း ချစ်စရာကောင်းလောက်အောင် တုန့်ပြန်တတ်သေး၊ သူ့မှာ အထူးခြားဆုံးက အမြဲပြုံးနေတတ်တာ၊ ရွှေဘုန်းကို ဘယ်နေရာမှာ တွေ့တွေ့ …ဘုန်းဘုန်းရေ… ဆိုပြီး ပြေးထွက်လာတယ်၊
"အော် ဘယ်ရယ် မဟုတ်ပါဘူး၊ သမီးရယ်၊ ဘုန်းဘုန်း ညောင်းလို့ လမ်းလျှောက်တာပါ"
"အဲဒါဆို သမီးလည်း လိုက်မယ်နော်…"ဆိုပြီး အနားက ကပ်ပါလာတတ်တယ်၊ ဒီလို ကပ်ပါလာရင်လည်း ပါစပ်က အငြိမ်မနေ၊ သူသိတာ မှန်သမျှ တတွတွတ်ပြောသွားတော့တာပဲ။
"ဘုန်းဘုန်း ၊ ဒါ ဘစီတို့ အိမ်လေ၊ အံမယ် ဘုန်းဘုန်း ဘစီကိုရိုက်နော်၊ သူက ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဧကရီမြတ်ကို ရီးစားစာ ပေးတယ်…"
"အဟဲ၊ ဟုတ်လို့လား သမီးရဲ့ "
"ဘုန်းဘုန်း မယုံရင် သူ့မေးကြည့်ပါလား…အင်းလေ သူက ဘုန်းဘုန်း မေးရင်တော့ အမှန်တုိုင်း ဘယ်ဖြေပါ့မလဲ၊ တော်ကြာ သမီးက ညာပြောသလို ဖြစ်နေပါ့မယ်…"
တစ်ခါကလည်း လမ်းလျှောက်ရင်း သူပေါက်ကရ မေးတဲ့ မေးခွန်းကို ကြည့်ပါဦး၊ လမ်းမှာ မိုးတွင်းဆိုတော့ ချောနေတဲ့ လမ်းကို ကြည့်ပြီး သတိထား ငုံ့လျှောက်ရင်း သူမေးလိုက်တာက..
"ဘုန်းဘုန်း အဲဒီတီကောင်လေးက ဘယ်သွားနေတာလဲဟင်"…အဲလိုလည်းပေါက်ပေါက်ရှာရှာလည်း မေးတတ်တဲ့ ချစ်စနိုးပါ။
"ဘုန်းဘုန်း၊ သမီး နှစ်တိုင်း သင်တန်းတက်မှာနော်…သမီးကိုနှစ်တိုင်း ဘုန်းဘုန်းရဲ့ သင်တန်းသူ အဖြစ်လက်ခံရမယ်နော်"
"အော်…လက်ခံမှာပေါ့ သမီးရဲ့၊ သမီးကသာ အပျိုကြီးဖြစ်သွားလို့ ရည်းစားတွေ ဘာတွေ ရသွားရင် ဘုန်းဘုန်း သင်တန်းကို တက်မှာ ဟုတ်တော့ဘူး"
"အဲဒိ ဘုန်းဘုန်းကလေ၊ မဟုတ်တာဆို သိပ်ပြောတာပဲ၊ ဘုန်းဘုန်းပဲ ပြောထားတယ်လေ၊ ရည်းစားထားရင် ငရဲကြီးတယ်ဆို…ဘုန်းဘုန်းနော်..ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြောထားပြီးတော့ မေ့နေတယ်၊ ဘုန်းဘုန်း ငရဲကြီးလိမ့်မယ်"
မှတ်ကရော..ချစ်စနိုးကတော့ တကယ်မလွယ်တာ…ကိုယ့်တုတ်နဲ့ ကိုယ့်ပြန် အရိုက်ခံရတယ်ဆိုတာ ချစ်စနိုးနဲ့ တွေ့မှ တစ်ကယ် လက်တွေ့ ခံရတော့တယ်၊ အဲဒိလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးဟာ ဒီနှစ် သင်တန်းချိန်နီးကာမှ သူ့အမေက ဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့ အလွန်ဝေးလံတဲ့ အရပ်တစ်ခုကို ခေါ်သွားတယ်လို့ သတင်းကြားရတယ်လေ၊ ချစ်စနိုး မရှိရင်တော့ ဒီနှစ်သင်တန်းကတော့ ပျင်းခြောက်ခြောက်ဖြစ် နေတော့မှာပဲ…လို့ စိတ်ထဲက တွေးမိလိုက်တယ်၊
"ဦးဇင်း၊ ဦးဇင်း ဘာတွေ တွေးနေတာလဲ၊ စာကြည့်တိုက်ရောက်နေပြီလေ…ကျော်တောင် သွားတော့မလားပဲ"
ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် စာကြည့်တိုက်ကို အလျင်စလို ရောက်ချင်ဇောနဲ့ မိုးစဲတော့ လယ်စောင့်တဲလေးက ကိုထွန်းဦးကို လိုက်မပို့ခိုင်းတော့ပဲ တစ်ပါးတည်း လျှောက်လာတာ အတွေးလွန်ပြီး စာကြည့်တိုက် လွန်သွားတော့မလို့၊ ရဟန်းအစ်မဖြစ်သူ ဆရာမက ထွက်ခေါ်မှ အတွေးစပြတ်သွားတယ်၊ စာကြည့်တိုက်ထဲဝင် ဘုရားဦးချပြီးရုံရှိသေး ဆရာမက ဆီးပြောတယ်။
"ဦးဇင်းရေ၊ မောမောပန်းပန်းနဲ့ပဲ ပြောရတော့မှာပဲ၊ ချစ်စနိုးလေ၊ မနေ့က သူ့အမေရဲ့ ဆွေမျိုးတွေဆီက ပြန်လာရင်း ညောင်တုန်းကို တဆင့်ဝင်တာ၊ အဲဒါ မြစ်ဆိပ်မှာ ရေချိုးရင်း ရေနစ်လို့ ဆုံးရှာတယ်…"
ရင်ထဲဆူးခနဲ နာသွားတယ်၊ ခုနပဲ လမ်းလျှောက်ရင်း သူ့အကြောင်း တစ်လမ်းလုံး တွေးလာတာ…ဖြစ်ရလေ သမီးလေးရယ်၊ ဒီအချိန်မှာပဲ မျက်ရည် စက်လက်နဲ့ ချစ်စနိုးနဲ့ အတူနေ အဒေါ်ဖြစ်သူက ၀င်လာပြီး ပြောပါတော့တယ်၊
"ဦးဇင်းလေးရေ၊ တူမလေးကိုက အဖြစ်ဆိုးပါတယ်၊ သူ့အမေ မကောင်းတာပေါ့၊ ကလေးက ဦးဇင်းလေး သင်တန်း နီးနေပြီ ပြန်ရအောင်ဆိုပြီး အတင်းပူဆာပြီး ပြန်လာကြတာ၊ ဒီကို တန်းပြန်ပါတော့လား၊ အဲဒါ ညောင်တုန်းမှာ ရှိတဲ့ ဆွေမျိုးတွေဆီ တဆင့် ၀င်လည်ပြန်သတဲ့လေ၊ အဲဒိမှာ ညနေ ကားလက်မှတ်ဖြတ်ပြီး နေ့လည် သူ့ ဦးလေးတွေနဲ့ မြစ်ဆိပ်မှာ ရေဆင်းချိုးလိုက်တာ၊ ရေနစ်သေပါလေရောလား…ဦးဇင်းလေးရယ်၊ အဖြစ်ဆိုးလိုက်တဲ့ သမီးလေး"
"ခု သမီးလေး ဘယ်မှာလဲ"
"တပည့်တော် အိမ်ကို မရရအောင် ပြန်ပြီး သယ်ခိုင်းထားတယ်၊ ဒီညရောက်မယ် ဘုရား၊ ဒီနှစ်တော့ ဦးဇင်းလေးရဲ့ သင်တန်းဖွင့်ပွဲဟာ သမီးလေး ချစ်စနိုးရဲ့ အသုဘနဲ့တိုးနေပါရော့လား၊ သမီးရေ...ထကြည့်ပါဦး၊ သမီးရဲ့ ဘုန်းဘုန်း ရောက်နေပြီလေ…"
ချစ်စနိုးအဒေါ်ခမျာ အသံမထွက်နိုင်ရှာတော့ပေ၊ ရွှေဘုန်းလည်း ရင်ထဲမှာဆို့နေတာ ဘာပြောလို့ ပြောရမှန်းပင် မသိတော့၊ ပြောသမျှ နားသာ ထောင်နေမိတော့တယ်..။
"ဦးဇင်းလေးရယ်…ဖတ်ကြည့်ပါဦး၊ ဟောဒီမှာလေ ဟိုတစ်လောက သူ့ဘုန်းဘုန်း လာရင် ပေးဖို့ဆိုပြီး လူကြုံနဲ့ ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ သမီးလေးရဲ့ စာလေး ဖတ်ကြည့်ပါဦး ဦးဇင်းလေးရယ်.." တွန့်လိမ်နေတဲ့ လက်ရေးနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာရွက်ပိုင်းလေးကို ကိုင်ထားတဲ့ ရွှေဘုန်းရဲ့ လက်တွေ တဆတ်ဆတ် တုန်နေပါတော့တယ်...
သို့ .... ဘုန်းဘုန်း…
သမီး စာရေးလိုက်ပါတယ်၊ ဘုန်းဘုန်းရေ…ဒီအချိန်ဆိုရင် ဘုန်းဘုန်း သင်တန်း ဖွင့်တော့မယ်နော်၊ သမီးကတော့ အဝေးကြီးကိုရောက်နေတယ် ဘုန်းဘုန်းရဲ့ ၊ သမီးက မလိုက်ချင်ပါဘူး ဘုန်းဘုန်း ရယ်၊ မေမေပေါ့၊ သူ့အမျိုးတွေဆီ သွားရအောင်ဆိုပြီး..အတင်းခေါ်တာ၊ သမီးက ဘုန်းဘုန်း သင်တန်းရောက်တော့မယ်၊ မလိုက်ချင်ပါဘူးဆိုတာကို မရဘူးလေ၊ ဒါပေမယ့် ဘုန်းဘုန်း စိတ်ချနော်…သမီး သင်တန်း အမှီရောက်အောင် ပြန်လာခဲ့မယ်၊ သမီးကို ဘုန်းဘုန်း စိတ်မဆိုးရဘူးနော်… သင်တန်း နည်းနည်း နောက်ကျရင်လည်း ဘုန်းဘုန်း သမီးကို မဆူရဘူးနော်…ခု မေမေ့ကို သင်တန်း အမှီ အရောက်ပြန်ဖို့ ပူဆာပြီးသွားပြီ ဘုန်းဘုန်းရဲ့၊ သမီး ဘုန်းဘုန်းဆီ အရောက်ပြန်လာမယ်နော်… ဘုန်းဘုန်း မျှော်နေနော်…
"ဟင်…ဒါဆိုရင် စောစောက ရွာအ၀င်လမ်းမှာ ကြားလိုက်တဲ့ အသံက…."
ရွှေဘုန်း (စေတနာပန်းခင်း) 29. 9. 2012 (7:21 A.M)
တပည့်တော် ဘလော့မှာ ပြန်လည်မျှဝေဖို့ ယူသွားပါတယ် ဘုရား ...း)
မြတ်နိုးသူ October 4, 2012 at 3:12 AM
Unknown September 20, 2014 at 7:49 AM
တပည့်တော်လည်း တပည့်တော်ရဲ့ သရဲအကြောင်းများစုစည်းမှုဆိုတဲ့ ဖုန်း application လေးတစ်ခုရေးသားဖို့ အတွက် ကူးယူသွားပါတယ်ဘုရား
ရင်နင့်စေသော ပန်းကလေး တစ်ပွင့် အကြောင်း (ဖြစ်ရပ်မှ...